Umvikeli we-postmeal blood glucose: Resveratrol-Healthy Care-Hunan Sunlight Bio-Tech Co, Ltd
Umvikeli we-postmeal glucose wegazi: I-Resveratrol
Amagama agqamile: Resveratrol glycoside, Ushukela wegazi we-Postprandial
INorthwest Plateau Institute of Biology yaseChinese Academy of Science, ifundile ukuthi i-resveratrol inganciphisa i-postprandial glucose, Umcwaningi unikeza enye indawo yokwakha i-postprandial hyperglycemia ekwelapheni isifo sikashukela i-mellitus.
I-Resveratrol isatshalaliswa kabanzi ezitshalweni futhi inokuqukethwe okuphezulu. Njengamanje, okungenani izitshalo ezingama-70 zitholakale zinama-resveratrol, lesi sidakamizwa esatholakala eTanggut rhubarb yiqembu Locwaningo ngokubuyiselwa kwezimila nezinsizakalo zezitshalo zezokwelapha eNorthwest Plateau Institute of Biology yaseChinese Academy of Science.
I-Tanggut rhubarb isatshalaliswa ezindaweni zaseGansu, Qinghai nase Qinghai naseTibet, Ikhula esigodini sase-alpine endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1600 kuye kwangama-3000.
UZhao Xiaohui, ongumcwaningi osebenzisana naye eNorthwest Institute of Plateau Biology yaseChinese Academy of Science, wethule ukuthi ngokuhlukanisa nokuhlola izakhi zamakhemikhali zeTanggut rhubarb, Resveratrol glycoside inemisebenzi ephambili ye-cy-glucosidase inhibitory futhi ingavimbela amagundane anesifo sikashukela ngemuva kwesidlo ushukela wegazi uyakhuphuka.
Kuyaqondakala ukuthi isifo sikashukela yisifo esingelapheki se-metabolic, ikakhulukazi esibonakala nge-hyperglycemia, kanye nezinkinga ezinzima zesifo sikashukela, kubandakanya isifo se-coronary artery, stroke, isifo se-peripheral arterial, i-retinopathy, isifo sezinso kanye ne-neuropathy.
"Ukulawula amazinga we-glucose we-postprandial kuyindlela ephumelelayo yokwelapha isifo sikashukela nokuvimbela izinkinga ezihlobene noshukela." UZhou Guoying, ongumcwaningi eNorthwest Plateau Biological Research Institute yaseChinese Academy of Science, uthe kunconywe ama-glucosidase inhibitors njengezidakamizwa zokuqala ezisetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela, kepha izidakamizwa zinomthelela omkhulu kwipheshana lesisu , okwenza kube nomkhawulo emtholampilo. Ngakho-ke, ukubheka ukusebenza kahle okuphezulu futhi okunobuthi obuphansi be-cy-glucosidase emikhiqizweni yemvelo kuyindawo yokucwaninga kulo mkhakha.
"Ekucwaningweni kwe-vivo kukhombisile ukuthi i-resveratrol yomlomo ingavimbela kakhulu ukukhuphuka kweglucose ye-postprandial glue ngendlela evamile yokuthola umthamo," kusho uZhao Xiaohui. "Ngaphezu kwalokho, ngokuhlaziywa kwe-eneticme kinetic kanye nokuhlolwa kwe-moleck docking kuqinisekisile indlela yokuvimbela i-resveratrol ku-α-glucosidase enqunywe."
Ngokusho kwe-International Diabetes Federation, ukwanda kwesifo sikashukela kubahlali basemadolobheni kuphakeme kakhulu kunokwabahlali basemakhaya. Ngo-2045, izinkulungwane ezintathu zeziguli ezinesifo sikashukela zizohlala emadolobheni. Umgomo wembulunga yonke we- “Urban Changing Diabetes” ukunciphisa izingozi zokukhuluphala ngama-25%, ngaleyo ndlela kugcinwe ukwanda kwesifo sikashukela ngo-2045 ngaphansi kwe-10%.
Ngakho-ke i-resveratrol izoba yimpumelelo kushukela.
Okwedlule: Yini iLycopene? Ungasifaka kanjani isicelo sezimonyo?
Okulandelayo: Ukuhlaziywa kwemisebenzi emithathu ye-pharmacological yeTongkat Ali